Proton GE: Yakasiyana sei neProton? (mutambo) | Linux Vakapindwa muropa
Proton GE chirongwa chemapatya kuProton izvo zvatinoziva. Iyo yekupedzisira chirongwa cheValve chakavakirwa paWINE iri kupa mufaro wakawanda kune vatambi vanoshandisa Linux. Nekuda kweiyi inoshamisa software yakabatanidzwa muSteam Play mutengi, Windows vhidhiyo mitambo inogona kutambwa sekunge ndevemuno Uye chokwadi ndechekuti rondedzero yemazita anoenderana inoramba ichikura uye kuita nani.
Proton GE iProton inovaka nezvinoburitswa kubva ku Vanilla vhezheni yeWINE. Zvakare, ine FFmpeg uye FAduio inogoneswa nekukasira, pamwe neese maProton makwapa akaiswa, pamwe neVKD3D. Naizvozvo, Proton GE inogona kutariswa seye "vitaminized" vhezheni yeprojekti yepasi.
Parizvino ichangotangwa mhando 6.10 kubva kuProton GE, imwe yeakanyanya kuvandudzwa aburitswa parizvino, uye nekunakidzwa kugadzirisa uye kugadzirisa. Mamwe akatanhamara ndeaya:
Mhinduro dzeUE4 dzakawedzerwa kuNecrumunda uye Tinunurei Mwedzi.
Gadzirisira Yekutadza Gear XX Yekuwedzera Core R 2 bug
Chikwata che Horizon Zero Pasi mifananidzo
Kugadzikana uye kuvimbika kwakagadziridzwa
Performance QPC uye LFH patch kuwanda kunokanganisa FPS
Yakagadziridzwa DXVK uye VKD3D ine zvigamba zvekuvandudza latency
Kana iwe uchifarira kuyedza iyi Proton GE, unogona kuzviita nekutevera aya matanho akareruka:
Dhawunirodha tarball neprojekti kubva pano.
Kana pasina ~ / .steam / mudzi / kuenderanatools.d / dhairekitori, gadzira iro.
Wobva wabvisa zvirimo mupakeji rakadzvanywa padanho rekutanga mune iro dhairekitori.
Tangazve Steam mutengi.
Iyi Proton GE inofanira ikozvino kuoneka. Ingotinya-kurudyi pamutambo> Zvivakwa> Kugarisana uye uve nechokwadi nesarudzo "Kumanikidza kushandiswa kwechimwe chinhu chinowirirana cheSteam Play" kunoongororwa.
Y kunakidzwa yekuvandudzwa kutsva kweProton GE maringe naProton ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Proton GE: Yakasiyana sei neProton?